The First Management School
We introduced our management training centre as lowest price and enabling employment procedure since 2004. Now we are operating our business school about 500 students by professional training course equally higher diploma passed competency. Our aim is to create our developed country as fast as.
We stand steadily for our citizens asacheapest management training centre for higher diploma equally course in the world.
HR Manager's Management & Leadership
IQN Single Subject Diplomas
Manager's Management & Leadership
Marketing Internal Training Course
Marketing Manager's Management & Leadership
The First Professional Certificate
လုပ်ငန်းတိုင်း၊ ကုမ္ပဏီကြီး/ငယ်တိုင်းမရှိမဖြစ်ရှိရမဲ့ လုပ်ငန်းစီမံချက်ဖြစ်သည်။
Business Plan ဆွဲခြင်းအားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံမိခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ အားသာချက်/အားနည်းချက်များကို (Strengths & Weaknesses)ို သိရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်မဲ့ အခွင်အလမ်းများနှင့် မိမိလုပ်ငန်းကို မည်သည်တို့က ခြိမ်းခြောက်မှုများကို (Opportunities & Threats) သိရှိခြင်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖိုံ့အတွက်မည်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးဗျူဟာများ (Business Strategies) အသုံးပြုရမည်ကို သိရှိခြင်း။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့် ရေရှည် (နောက် ၅နှစ်) အတွက် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိခြင်း (Future Projection) စသည်ဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဈေးကွက်ထဲမှာ မည်သို့ ရပ်တည်ရမည်ဆိုတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို သင်ကြားသွား မည်ဖြစ်သည်။
HR MANAGER’S MANAGEMENT & lEADERSHIP
HUMAN RESEOURCE PLANNING
* STRATEGICS MANAGEMENT
INTERVIEW STUCTURE & PROCESS
* EMPLOYEMENT CONTRACT
* WORK RULES (DISPLINE DOCUMENTATION FORM
* EMERGENCY INSTRUCTRIONS
* INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
(၁) လုပ်ငန်းတိုင်း၊ ကုမ္ပဏီကြီး/ငယ်တိုင်းမရှိမဖြစ်ရှိရမဲ့ လုပ်ငန်းစီမံချက်ဖြစ်သည်။
(၂) Business Plan ဆွဲခြင်းအားဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ခြုံငုံမိခြင်း၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ အားသာချက်/အားနည်းချက်များကို (Strengths & Weaknesses)ို သိရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နိုင်မဲ့ အခွင်အလမ်းများနှင့် မိမိလုပ်ငန်းကို မည်သည်တို့က ခြိမ်းခြောက်မှုများကို (Opportunities & Threats) သိရှိခြင်း။
(၃) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖိုံ့အတွက်မည်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးဗျူဟာများ (Business Strategies) အသုံးပြုရမည်ကို သိရှိခြင်း။
(၄) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့် ရေရှည် (နောက် ၅နှစ်) အတွက် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိခြင်း (Future Projection) စသည်ဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဈေးကွက်ထဲမှာ မည်သို့ ရပ်တည်ရမည်ဆိုတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို သင်ကြားသွား မည်ဖြစ်သည်။
Dip in Mkt (IQN, UK)
Award SQA (UK Government)
SCQF Award (UK Government) တို့ကို ရရှိသည့်အပြင
THE FIRST MANAGEMENT SCHOOL မှ ဖွင့်လှစ်သော Marketing Manager’s Management & Leadership Course (Apply Course) ကို အခမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီး Professional Certificate ကိုထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Dip in HRM (IQN,UK)
SQA Award (UK Government)
SCQF Award (UK Government) တိုကို ရရှိသည့်အပြင်
THE FIRST Management School မှ ဖွင့်လှစ်သည့် HR Manager’s Management & Leadership Course
(Apply Course) ကို အခမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပြီး Professional Certificate ကိုထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
SCQF Award (UK Government)
Dip in HRM ( IQN, UK )
SQA Award ( UK Government )
SCQF Award ( UK Government )
MANAGER’S MANAGEMENT & LEADERSHIP
PESTEL ( STEEPEL ) analysis
1.Marketing Culture and Orientation
2.Markets and Marketing Environment
5.Consumer & Consumer Behaviour
6.Product Management and Development
7.Pricing Policies and Price Setting
8.Distribution Policies and Management
11.Brand and Brand Management
14.Market Research Techniques
17.Product Innovation Models
Marketing Strategy တည်ဆောက်ခြင်း
Marketing Plan ရေးဆွဲခြင်း
Promotional Plan ရေးဆွဲခြင်း
များတည်ဆောက်ထိန်းကျောင်းခြင်းတို့ကို နားလည်ကျွမ်းကျင်စေရန် သင်ကြားပေး ခြင်းဖြစ်သည်။
Case Study များ၊ Example များဖြင့် သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်အတွင်းတွင် တကယ်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများကို ယုံကြည်မှုရှိစေရန် Apply Type ဖြင့် သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
(Advertising / Sale Promotion / Personal Selling / Public Relation / Direct Marketing) စသည့် Promotion Mix အား အထူးကျွမ်းကျင်စေရန် နမူနာ Case ပေါင်းများစွာဖြင့် သင်ကြားပေးပြီး၊ Video File များ၊ Colour Paper များဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ သင်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
A sale can take place through
The creation of value or perceived value
သင်တန်းကျောင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် မံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်အား Professional Level အထိ အသက်သာဆုံး သင်တန်းကြေးဖြင့် သင်ကြားစေလိုခြင်းဖြစ်ပြီး စာအုပ်စာတမ်းကြေး / Certificate ကြေး စသည့် မည်သည့်မျှ ထပ်မံကောက်ခံခြင်းမရှိပါ။
- မည်သည့် Department Manager/ Director ရာထူးကို တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်ဖြစ်စေ Professional Level ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက်
- Business Management, Business Communication, Project Management, Risk Management, Human Resources Management, Marketing Management, Macroeconomics တို့ကို နားလည်ကျွမ်းကျင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံ Level ကိုသာ သင်ကြားပေးခြင်း မဟုတ်ဘဲ Strategic Level စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်အထိ သင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
09 252358498 , 09 970373495
no.5 , sec(c-3) , hlasanyin , utunlisnt , yangon
© Copyright - Host Myanmar